RoboVac X80 uye HomeVac H30, itsva aspiration kubhejera kubva eufy | Gadget Nhau
Iyo nyanzvi brand mune yekumba otomatiki uye sarudzo kune yakabatana imba eufy yakafunga kubheja pakupinda zvizere mumusika wekutsva nesarudzo RoboVac X80 iyo yavanoti irobhu yepamberi ye robhoti inoshambadza pamusika, uye yavo yekuchenesa maoko KumbaVac H30, isu tichavaziva zvakadzama nehunhu hwavo hutsva uye hunhu.
2 KumbaVac H30
RoboVac X80 ndiyo yekutanga yekuchenesa robhoti yenyika kusanganisira mbiri yekutsvaira tekinoroji
turbine, iyo Inopa 2 motors e2000Pa yesimba rekutsveta. Izvi zvinowedzera zvakanyanya kumanikidza kwesimba kwerobhoti, kuve nekukwanisa kuvandudza kuunganidzwa kwebvudzi dzinovaraidza ne57,6% * panguva imwe chete nguva yakashandiswa zvinobudirira kuchenesa uye inoshanda mune imwechete kupfuura. Iine iyo RoboVac X80 Hybrid, yakadzama yekuchenesa inogoneka neayo maviri basa rekutsvaira uye mopping panguva imwe chete. Chiyero chekushandisa chetangi revhu chakawedzera ne127% *, ichisvika
inokwana kusvika ku600ml.
*> Ruzivo rwunopihwa neiyo mhando
Pamwe chete, iPath laser navigation uye smart mepu matekinoroji anofambiswa ne
Artificial Intelligence (AI Mepu 2.0) inogadzira mepu chaiyo yeimba iyo inobatsira iro robot kuverenga a
inoshanda zvakanyanya yekuchenesa maitiro pasina kukanganwa chero kona.
Yechipiri yezvinhu zvitsva izvo eufy yakaratidza nhasi ndeye HomeVac H30 inobata ruoko yekuchenesa,
iyo inopa kuita kwakasiyana siyana zuva nezuva. Iine yayo TriPower TM sisitimu ine yakanyanya kukweva kugona,
zviri nyore kuchengetedza nharaunda yakachena, hutano uye hwakasununguka kubva kune ese marudzi ma allergener. Dhizaini yake
compact uye lightweight, chete 808 gramu yehuremu, zvinoita kuti zvive nyore kushandisa kwenguva yakareba
yenguva uchichengetedza nzvimbo yetangi revhu re 250ml iyo inosanganisira a
Guruva kukwiza tekinoroji kubvisa firita bvudzi zviri nyore.
Zvichienderana nepakeji yakasarudzwa, HomeVac H30 inogona kusanganisira zvishandiso zvekuchenesa mota, a
motorized brashi iyo inobatsira kuchenesa kwemvere dzemhuka, uye mu Infinity kit, bhurasho re
pasi rakaomarara iro rinokwanisa kupukuta uye kupomba mune imwechete pass.
Mhando nyowani dzichavepo kutenga kuSpain pakupera kwaGunyana muna
Amazon. Mhuri yeRoboVac X80 inotanga pa € ​​499,99 uye iyo X80 Hybrid modhi inodhura € 549,99.
HomeVac H30 ine mutengo wekutanga we € 159,99, iyo inosiyana zvichienderana neshanduro uye zvishongedzo
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Noticias » RoboVac X80 uye HomeVac H30, itsva aspiration kubhejera kubva eufy